बद्रीलालको एकल अग्रता : RajdhaniDaily.com -
Home Not-to-be-missed बद्रीलालको एकल अग्रता
बद्रीलालको एकल अग्रता
जिरी । पर्यटकीय नगरी जिरीमा जारी जिरी ओपन फिडे रेटिङ चेस प्रतियोगितामा तीन पटकका राष्ट्रिय च्याम्पियन बद्रीलाल नेपालीले एकल अग्रता कायम गरेका छन् । शतप्रतिशत नतिजा निकालेका बद्रीलालले शुक्रबार सम्पन्न तेस्रो चरणको खेलमा सर्लाहीका रवीन्द्रबहादुर थापालाई पराजित गरे । चौथो तथा पाँचौं चरणमा दोलखाका राजीव कार्की तथा सहदेव चौंलागाईमाथि जित हात पारे । पाँच चरणको खेलपश्चात् पाँच अंक बनाएका बद्रीलालले शनिबार हुने छैटौं चरणको खेलमा दोलखा जिल्ला च्याम्पियन आशिष फुयाँलको सामना गर्नेछन् ।
युवा सञ्जाल जिरीको आयोजना तथा जिरी नगरपालिकाको सहयोमा जारी प्रतियोगिताको पाँचौं चरणको खेल बराबरीमा टुंग्याएका दोलखाका आशिष फुयाँल तथा ललितपुरका हेराकाजी मर्हजन समान ४.५ अंकका साथ संयुक्त दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । यसअघि आशिषले तेस्रो तथा चौथो चरणमा क्रमशः ललितपुरका सञ्जय महर्जन र स्याङ्जाका युवराज पौडेललाई हराएभने हेराकाजीले तेस्रो चरणमा रामेछापका दिलबहादुर सुनुवार तथा चौथो चरणमा गोरखाका गेहेन्द्र आचार्यमाथि जीत हात पार्न सफल रहे । पाँचांै चरणको खेलपश्चात् युवराज पौडेल, राजीव कार्की, रवीन्द्रबहादुर थापा र संजय महर्जनले समान ४—४ अंक बनाएका छन् ।
त्यस्तै, रौतहटका रामचन्द्र दाहाल, रामेछापका दिलबहादुर सुनुवार, दोलखाका सहदेव चौंलागाईं, केवल खत्री, दीपक बस्नेत, ग्यालजेन शेर्पा, मधुकुमार श्रेष्ठ, धर्मानन्द दाहाल, डेन्डु शेर्र्पा, विवेक कार्की तथा सञ्जय सुनुवार समान ३—३ अंक बनाउन सफल भए । फिडेको स्विस लिग प्रणालीअनुसार सात चरणमा सम्पन्न हुने प्रतियोगितामा १० रेटेडसहित कुल ४२ जना खेलाडीको सहभागिता रहेको छ । प्रतियोगिताअन्र्तगत शनिबार छैटौं तथा सातौं चरणका खेल सञ्चालन हुनेछन् ।
सर्लाही । गएको २० बैशामा पुरुषलाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाई बिभत्स हत्या गरी फरार भएका युवा पक्राउ गरेका छन् । पक्राउ पर्नेमा घारीबथानका ३५...
संसारकै सुन्दरी नायिकाको बोल्ड तस्विर (फोटोफिचर)
Not-to-be-missed Dhruba Lamsal - November 23, 2020 0
एजेन्सी । विश्वमै सुन्दर अभिनेत्रीको रुपमा चिनिन्छिन् एरियल विन्टर । उनको सुन्दरताको चर्चा केबल हलिउडमा मात्र सिमित छैन । शारीरिक बनोटकै कारण उनी विश्वभर...
प्रदेश ३ Sushila Bishwokarma - August 5, 2020 0
मोडालिटी परिवर्तन सहित लकडाउन थपिने
काठमाडौं । कोभिड—१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकलमा जेठ पाँच गतेपछि लकडाउनको...
‘नायिकाको साइड बिजनेस हुनुपर्छ’
काठमाडौंकी रुविना थापाको विगतको परिचय मोडल थियो । अहिले उनी नायिकाका रूपमा स्थापित हुँदै छिन् । रुविनाले डेब्यु गरेको चलचित्र ‘लभ डायरिज’ शुक्रबारबाट सिनेमा...
सडकले दिएको सास्तीः पहिरोको जोखिमले घरै छोड्न बाध्य
प्रदेश ६ Kumar Raut - June 18, 2020 0
रुकुमपूर्व । असार महिना लागेसँगै सिस्ने गाउँपालिका- ५ का कमल नेपालीलाई भोक निद्रा हराएको छ । घरमाथि रहेको सडकबाट पहिरो खसेर घर बगाईदिने डरले...
Breaking News Roshan Shrestha - December 10, 2020 0
काठमाडौं । सरकारले विवादबीच प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको बिहीबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद...
Breaking News Sushila Bishwokarma - August 8, 2020 0
त्रिशूली । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिएपछि नुवाकोटमा पनि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले आजराति १२ बजेदेखि १० दिनसम्म लागू हुने गरी निषेधाज्ञा...
एक्लो यो रात भन्दै आए संगीतमा आशिष
Not-to-be-missed Kumar Raut - September 25, 2020 0
काठमाडौं । युवा पुस्ताको नेपाली संगीतमा आकर्षण बढेको बेला युवा गायक गायक आशिष हल्क कार्की पनि नयाँ गीत लिएर दर्शक–श्रोतामाझ आएका छन् । उनले...